क्रिकेटमा ‘सिन्डिकेट’ भन्नेसँग ‘फेस टु फेस’ गर्न तयार छु
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्का शनिबारबाट सुरु हुने एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को तयारीमा व्यस्त छन् । ईपीएलमा साबिक बिजेता विराटनगर वारियर्सको नेतृत्व गरिरहेका पारस उपाधि रक्षाको योजनासहित टिमलाई तयार पारिरहेका छन् । मैदानभित्र ब्याट र बलसँगको नाता खरो रुपमा प्रस्तुत गर्ने पारसका विचार पनि त्यतिकै खरो हुने गर्छन् । क्रिकेट प्रशासनप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट गर्ने क्रममा पारस कहिल्यै सम्झौता नगर्ने खेलाडीका रुपमा दरिएका छन् ।
मैदानमा टिमलाई सफलताको बाटोमा डोर्‍याउन रणनीति बनाउन सक्ने भएकै कारणमात्र उनी नेपाली क्रिकेटको सफल कप्तान भएका होइनन्, अत्यन्तै अप्ठेरो अवस्थामा पुगिसक्दा पनि टिमलाई त्यहाँबाट फर्काउन सक्ने क्षमता पनि उनीमा छ ।
मैदान बाहिर पनि उनी सम्पूर्ण खेलाडीको प्रतिनिधिका रुपमा अत्यन्तै निर्भिकतापूर्वक आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । टिम र क्रिकेटको हितमा बोल्दा उनी मैदानभित्रको कप्तानभन्दा बिल्कुल फरक नेताझैँ देखिन्छन् । मैदानमा रणनीति बनाउँदा जस्तो जोडघटाउ उनको बोलीमा देखिँदैन । नेपाली खेलकुदमै एउटा स्पष्टवक्ताको पहिचान बनाएका पारससँग बाह्रखरीका अजय फुयाल र सुजन श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
ठिक छ । गतवर्षको च्याम्पियन भएकाले हामीमा स्वभाविक दबाब छ । गतवर्ष हामीले असाधारण क्रिकेट खेल्दै अपराजित रहन सफल भएका थियौं । यसपाली पनि सबैले राम्रो मेहनत गरेका छन् । टिम राम्रो बनेको छ । हामी उच्च मनोबलका साथ तयारीमा छौं । तर प्रदर्शन कस्तो हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । पहिलो एक हप्ताले हाम्रो बाटो तय गर्छ ।
उपाधि रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ त ?
अरु टिम पनि राम्रा छन् । सबैले राम्रा खेलाडी ल्याएका छन् । लिगमा हेर्ने हो भने विदेशी खेलाडी मुख्य देखिएका छन् । खेलाडी र टिमको रुपमा हामी विश्वस्त छौं । सुरुमा शीर्ष दुईमा परेर क्वालिफायरको फाइनल पुग्नुपर्छ । हामी अहिले त्यसमै केन्द्रित छौं । आशा गरौं, उपाधि रक्षा गरिएला ।
नेपालमा हुने ट्वान्टी–२० लिगमा विदेशी खेलाडी हावी भइरहेका छन्, नेपाली खेलाडीको स्तर खस्किएको हो ?
होइन, विदेशी खेलाडी बढी अनुभवि छन् । त्यसैले उनीहरुको प्रदर्शन राम्रो छ । नेपाली खेलाडीको पनि प्रदर्शन राम्ररी मुल्यांकन गर्ने हो भने नराम्रो छैन । नेपालीले पनि राम्रै खेलिरहेका छन् । विदेशीको हकमा धेरै अनुभव भएका खेलाडीले राम्रो खेल्दा त्यस्तो देखिएको हो । हामी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय देश भए पनि सिक्नुपर्ने धेरै कुरा बाँकी छन् । हामी सिक्ने क्रममै छौं ।
हाम्रो क्रिकेट अहिले विकास गर्ने मोडमा पुगेको छ । उनीहरुको खेलबाट हामीले धेरै सिक्न सक्छौं । यसले भविश्यमा हामीलाई फाइदा पुग्छ । कस्ले प्रदर्शन गर्‍यो, नेपालीले खेलेन जस्ता कुरा गर्नुभन्दा कुनै पनि टिमले प्रतियोगिता जित्दा धेरै साना कुराको पनि ठूलो महत्व भइरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
एउटा असाधारण क्याच, एउटा राम्रो रनआउट, टिमभित्रको वातावरणलगायतका कुराले प्रदर्शन र नतिजा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन । पक्कै पनि विदेशीले असाधारण खेलेका छन् । नेपालीले पनि राम्रो खेलेका छन् ।
नेपालीको तुलनामा राम्रा विदेशी खेलाडी ल्याइएको हो ?
पक्कै पनि नेपालमा लिग खेल्न आउने विदेशीहरु राम्रा खेलाडी नै हुन् । उनीहरुको एक्सपोजर राम्रो छ । जुन नेपालीले पाएका छैनन् । नेपालीले त एक्सपोजर नै पाएका छैनन् । यी विदेशीसँग खेल्दा बरु थोरै मात्रामा भए पनि नेपाली खेलाडीलाई फाइदा पुगेको छ ।
नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो । अबको योजना चाहिँ के हो त ?
नेपालको क्रिकेट सबै आईसीसीको हातमा छ । हामीले तीन–चार महिना अगाडि नै हाम्रा आवश्यकता र इच्छा समेटेर सबै योजना आईसीसीमा पठाएका छौं । तर आईसीसीले पनि नेपालको क्रिकेटमामात्र केन्द्रित हुन पाउँदैन । दूर्भाग्यपूर्ण रुपमा क्रिकेट संघ नभएको अवस्थामा हामी आफैँ केही योजना बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।
आईसीसीबाट सीमित कुरामात्र पास हुन्छन् । नेपाली क्रिकेट बडो अप्ठेरो अवस्थामा छ । यो अवस्था आउनुको कारण व्याख्या गर्ने हो भने फेरि मैले सबै अन्तर्वार्तामा भन्ने गरेका क्रिकेट संघमा यो भएन, त्यो भएन भन्ने कुरामात्र दोर्‍याउनुपर्छ । तर मुभिङ फरवार्ड हामीले एउटा देशको रुपमा हामीलाई यति म्याच चाहिन्छ भनेका छौं । हेरौं, आईसीसीले के निर्णय गर्छ ।
२०२२ सम्ममा आईसीसीको क्यालेन्डरअनुसार नै ३६ वटा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल पक्का छ । योबाहेक दुईदेशीय शृंखलाको कुरा तपाईंहरुको प्रस्तावमा छ ?
हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । आईसीसीबाट पास हुन बाँकी छ । जनवरीमै यूएईमा दुई देशीय एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला हुन सक्छ । आईसीसी र यूएई क्रिकेट बोर्डको सहमतिमा निर्णय हुने हो । त्यसो भयो भने दुई महिनापछि हाम्रो टिम भ्रमणमा निस्कने छ ।
नेपालमा चाहिँ नगर्ने ?
त्यसका लागि मान्यताप्राप्त एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मैदान चाहिन्छ । हामीसँग भएको एउटामात्र ढंगको मैदान भनेको कीर्तिपुर हो । त्यसले अहिलेसम्म एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन । आईसीसीले नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल गर्न सक्छ भनेर सुपरिवेक्षण टिम पठायो र त्यो टिमले कीर्तिपुरलाई मान्यता दियो भने मार्च–अप्रिलतिर घरेलु शृंखला पनि हुन सक्छ ।
घरेलु मैदानमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला भए कसलाई निम्त्याउन चाहनुहुन्छ ?
हामी नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड्ससँग खेल्न पाए खुसी हुन्छौं । अहिले देशका घरेलु लिगमा त्यहाँका खेलाडीहरु आएर खेलिरहेका छन् । यूएई पनि नेपाल भ्रमणका लागि इच्छुक छ । यो सबै हाम्रो योजना कसरी गर्छौं भन्नेमा भर गर्छ । अरु सबै देशले वर्षभरीको योजना बनाएका हुन्छन् । त्योसँग पनि हाम्रो प्रस्ताव मिल्नु पर्‍यो ।
नेपाली प्रशिक्षककै नेतृत्वमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायो । तर तपाईंहरु विदेशी प्रशिक्षक चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, किन ?
कस्ले कस्लाई पुर्‍यायो भन्दा पनि टिमको ‘इन्टर्नल फङसनिङ’को कुरा हो । पारस खड्काले गर्दा नेपालको क्रिकेट यहाँ पुगेको होइन, शक्ति गौचनले गर्दा होइन, जगत टमाटाले गर्दा यहाँ पुगेको पनि होइन । यसमा हरेक खेलाडी र प्रशिक्षकको उत्तिकै योगदान छ । त्यसमा जगत गुरुको होस्, पुबुदु दासानायकेको होस वा रोए डायसकै किन नहोस् ।
त्यसले गर्दा कुन प्रशिक्षकले कहाँ पुर्‍यायो भन्दा पनि अबको अर्को चरणमा हामी कहाँ पुग्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको वर्षभर क्रिकेट वातावरणमा रहने राम्रा खेलाडीहरुसँग हो । त्यहीअनुसार हामीले पनि योजना बनाउनुपर्छ । त्यसैले गर्दा नेपाल क्रिकेटलाई विदेशी प्रशिक्षक चाहिएको छ ।
अझ भन्ने हो भने प्रशिक्षकमात्र होइन, प्रशिक्षकहरु चाहिएको छ । ‘एक्सपर्ट कन्सल्टेन्ट’ चाहिएको छ । हामी स्थिर भइसक्यौं । हामी सिनियर खेलाडीले जुनियरलाई दिने सल्लाह, टिम मिटिङमा गर्ने कुरा पनि केही बाँकी छैन । हामी आफैंलाई पनि नयाँ भ्वाइस, नयाँ तरिकाहरुको कुरा चाहिन्छ भन्ने फिल भएको भएर विदेशी प्रशिक्षकहरु चाहियो भनेका हौं ।
नेपाल क्रिकेटलाई अब अर्को उचाईमा पुर्‍याउन वा यही उपलब्धि जोगाउन पनि ब्याटिङ र बलिङमा विशेषज्ञ प्रशिक्षक चाहिन्छ ।
पछिल्लो समय सिनियर खेलाडीको प्रदर्शन खस्किएको हो ?
सिनियर भन्दा पनि धेरै खेलाडीहरु एउटा निश्चित स्तरमा प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा अलिकति तलमाथि हुँदा प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । तर हाम्रो टिम अत्यन्तै युवा छ । राष्ट्रिय टिम हेर्ने हो भने म, ज्ञानेन्द्र (मल्ल), वशन्त (रेग्मी) र शरद (भेषावकर) बाहेक सबैजना अन्यन्तै कम उमेरका छन् ।
विनोद भण्डारी र सागर पुनहरु टिममा ‘इन–आउट’ भइरहेका छन् । बाँकी सात–आठ जना खेलाडी अत्यन्तै युवा छन् । टिम एकैपटक फेरिने होइन । पहिला राजु खड्का दाईहरु हुनुहुन्थ्यो, विनोद दास दाईहरु हुनुहुन्थ्यो, शक्ति गौचन दाईहरु हुनुहुन्थ्यो । पछि हामी आयौं । ‘ट्रान्जिसनको फेज’मा सिनियर खेलाडीले पनि राम्रो गर्नुपर्छ ।
सिनियरलाई स्थानान्तरण गर्ने युवाहरु आउने बाटो छैन । कसरी थेगिएला नेपाली क्रिकेट?
यो त क्रिकेट सुरु भएदेखि नै नेपालमा संरचना भएकै छैन । यो हामीले स्वीकार्नुपर्ने कुरा हो । जति पनि क्रिकेटका पदाधिकारीहरुले ‘हामीले अन्डर १५ गर्‍यौं । हामीले अन्डर १७ गर्यौं’ भन्नुहोला । त्यो सिस्टमबाट खेलाडीहरु आए, खेले । तर अबको अवस्थामा हामी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय देश भइसकेपछि पहिलाकै तरिकाले अगाडि बढ्न खोजे एकदम गाह्रो हुन्छ ।
पक्कै पनि राष्ट्रिय टोलीमा अहिले प्रतिस्पर्धा धेरै छ । दुई वर्षअघि २० जनाबाट टिम छान्नुपर्थ्यो भने अहिले ३० जना पुगिसकेको छ । देशभरी सानोतिनो भए पनि, व्यवस्थित नभए पनि प्रतियोतिगाहरु भइरहँदा खेलाडी आफैँ उत्पादन भइरहेका छन् ।
इटहरी प्रिमियर लिग हुन्छ, कहिले तिलोत्तमा प्रिमियर लिग हुन्छ । देशमा क्रिकेट भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा भएन भन्ने हो । स्थानीय स्तरका प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय स्तरमा समेटने सिस्टम पहिला पनि थिएन, अहिले झन क्यान नभएको बेला हुने कुरै भएन ।
भएका खेलाडीलाई हामीले ह्यान्ड पिक गरेर राम्रो वातावरण दिने प्रयास गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यौं । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पायौं । हामीले आजभन्दा १० वर्षपहिला नै ढंगको संरचना बनाउनुपर्थ्यो । सिस्टम बनाउन १० वर्ष ढिलो भइसक्यो । अब पनि सिस्टम नबने नेपाली क्रिकेट धरासायी हुन सक्छ । हामी ठूलो आकाशको बादलको रुपमा छौं । ‘एभ्री क्लाउड ह्याज अ सिल्भर लाइनिङ’ भनेजस्तो ‘होराइजन’मा पुगेका छौं ।
त्यसैले यो स्तरमा बसिरहन पनि हामीलाई चुनौती छ । अरु टिम, अरु खेलाडीको एक्सपोजर हेर्ने हो भने हामीसँग केही छैन । तर हामीसँग अर्को एउटा ठूलो एडभान्टेज चाँही छ, अहिले २०–२१ वर्षका केटाहरु हामी त्यो उमेरमा हुँदाभन्दा धेरै रामो क्रिकेट खेल्छन् । त्यसले गर्दा आशा गर्ने ठाउँ छ । राम्रो वातावरण दियो भने यिनीहरुले नेपाली क्रिकेटलाई अझ माथि पुर्‍याउन सक्छन् । त्यसको लागि विशेषज्ञ प्रशिक्षकहरु र राम्रो घरेलु क्रिकेट संरचना चाहियो भनेको हो ।
क्यान विवाद के भइरहेको छ ?
अहिले मुद्दामा अड्किएको छ । निर्वाचित समितिले मुद्दा फिर्ता लिनेबित्तिकै आईसीसीले नयाँ निर्वाचनको प्रक्रियाबाट लगेर टुंग्याउने भनेको छ । मुद्दा फिर्ता लिने मौखिक कुरामात्र भएको छ । मुद्दा फिर्ता लिनेबाहेक सबै कुरा सम्पन्न भइसक्यो, मुद्दा फिर्ता लिनेबित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ ।
खेलाडी, कप्तान, छनोटकर्ता, क्यान, आईसीसी प्रतिनिधिलगायत धेरै भूमिकामा हुनुहुन्छ । खासमा तपाईं के हो ?
पारस खड्का सबभन्दा पहिला क्रिकेटर हो । त्यसबाहेक क्रिकेटलाई फाइदा हुने जति पनि कुरा छ, त्यसमा आफूले आफूलाई अगाडि प्रस्तुत गर्न तयार छ ।
एउटै मानिस खेलाडी, छनोटकर्ता र अरु प्रशासनिक भूमिकामा हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुँदैन ?
हुँदैन । मलाई भन्दा पनि अरुलाई ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ होला । एउटा कप्तान र खेलाडीको रुपमा सकेसम्म राम्रो प्रदर्शन गरेर टिमलाई जिताउन कोशिष गर्ने हो । अहिले विदेशी प्रशिक्षक नहुँदा जगत गुरु, म र आईसीसीको प्रतिनिधि मिलेर खेलाडी छानिरहेका छौं । हामीले खेलाडी छान्ने नेपाल क्रिकेटका लागि हो ।
मैले चिनेका आफ्ना मानिस छानेको होइन । नेपालको क्रिकेटमा जिम्मेवारी लिने मानिस नभएकाले आफूले बाध्यतावश धेरै काम गर्नुपरेको हो । क्रिकेटको सिस्टम राम्रो भएको भए मेरो काम खेल्नेमात्र हुन्थ्यो । तर दूर्भाग्यवश म खुला रुपमा भन्न सक्छु, जिम्मेवार मानिस नभएकाले मैले जुन जुन ठाउँमा नेपाली क्रिकेटका लागि राम्रो हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ प्रस्तुत हुनु परेको हो ।
पीपीएल आयोजनामा आफैं लाग्नुभयो नि, किन ?
त्यो ठाउँ क्रिकेटको सम्भावना भएको ठाउँ हो । क्रिकेटलाई काठमाडौं बाहिर पुर्याउनुपर्छ भन्ने हो । चार महिना लाग्दा पहिलो पटक नेपाली क्रिकेटको इतिहासमा ‘स्पाइक’ लगाएर प्रतियोगिता भयो ।
तपाईंहरु आफैँ नेपालमा ट्वान्टी–२० होइन, लामो स्वरुपको क्रिकेट चाहिन्छ भन्नुहुन्छ । अनि आफैँले गर्दा चाहिँ २० ओभरकै प्रतियोगिता गर्नुहुन्छ नि ?
५० ओभर र दुई दिने प्रतियोगिताका लागि प्रायोजक छैनन् । राखेपसँग धेरै योजनाहरु छन्, तर हुँदैनन् । हामीले त्यस्तो प्रतियोगिता गर्न सक्दैनौं । अहिले डीपीएल, पीपीएल र ईपीएलजस्ता प्रतियोगिताले क्रिकेटको माहोल स्थापित गरेका छन् । खेलाडीलाई राम्रो हुन थालेको छ । स्तरीय खेलाडीसँग नेपाली खेलाडीले खेल्न पाउन थालेका छन् ।
नेपालमा तीनवटा राम्रा लिग हुन्छन् भनेर विश्वलाई सन्देश दिन सफल भएका छौं । विश्वभरका खेलाडीहरु आउन इच्छुक छन् । नकारात्मक हुने हो भने जत्ति पनि सकिन्छ । तर सकारात्मक हुने हो भने यस्ता प्रतियोगिताले नेपाली क्रिकेटलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । नेपाली क्रिकेटको सम्भावना थप उजागर गरेका छन् ।
दुई दिने र तीन दिने प्रतियोगिता गर्ने भनेको क्यान वा राखेपले हो । क्यान हुँदा पनि एक पटक दुई दिने प्रतियोगिताको सोचसम्म आएको थियो । तर हुँदा चाँही उही एकदिवसीय प्रतियोगितामात्र भयो । बरु क्यान प्रतिबन्धमा परेपछि धेरै प्रतियोगिता भएका छन् । यसले पनि मान्छेको भिजन र सोच देखाउँछ । जिम्मेवार व्यक्ति जिम्मेवार ठाउँमा नहुँदा खेलाडी नै प्रतियोगिता आयोजनामा होमिनु परेको हो । क्रिकेटको लागि म आफूलाई जहाँ पनि प्रस्तुत गर्न तयार छु ।
कहिलेसम्म खेल्नुहुन्छ ?
म सायद तीन महिना खेलुँला वा तीन वर्ष खेलुँला । पाँच वर्षभन्दा बढी त खेल्दै खेल्दिन । जुन दिन मलाई खेल्न सक्दिन भन्ने लाग्छ त्यो दिन म सन्यास घोषणा गर्छु । त्यो दिन भोलि पनि हुन सक्छ । बढीमा पाँच वर्ष हो ।
कप्तानकै हैसियतमा संन्यास लिने हो ?
कप्तान भन्दा पनि टिमलाई कहाँसम्म लान सकिन्छ भन्ने कुरा हो । धेरै मानिसको धेरै सोच होला । क्रिकेट अहिले पारसको, ज्ञानेन्द्रको, शरदको, प्रचण्डको, केपी ओलीको र शेरबहादुर देउवाको भन्दा पनि नेपालको हो ।
त्यसैले गर्दा हामीमाथि नेपाली क्रिकेटलाई माथि उठाउने जिम्मेवारी छ । एउटा कप्तानको नाताले खेलाडीको सम्मान पाएसम्म र आफूले राम्रो गर्न सकेसम्म निरन्तरता दिने हो । विस्तारै युवा कप्तानलाई ग्रुम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।
तपाईंपछिको कप्तान को हो त ?
पारस भए पनि नभए पनि क्रिकेट रहन्छ । टिमले अहिले युवा खेलाडीमा सोमपाल कामी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, अनिल शाह, रोहित पौडेल वा आरिफ शेखमा कप्तान हुने सम्भावना धेरै देखेको छ । उनीहरुलाई राम्ररी ‘ग्रुमिङ’ गर्‍यो भने उनीहरु भावी कप्तानको दाबेदार हुन् । आजको अवस्थामा उनीहरुको सम्भावना बढी देखिए पनि उनीहरुले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
खेल्न छोडेपछि तपाईं क्यानको अध्यक्ष हुने चर्चा छ नि, हो ?
नयाँ विधानअनुसार खेल्न छोडेको दुईवर्षसम्म संघमा आउन पाइन्न । तर अध्यक्ष नभए पनि व्यवस्थापनमा आउन सक्छु । खेल्न छोडेपछि मैले व्यवस्थापकको रुपमा काम गरेर पनि देखाउनुपर्छ । व्यवस्थापनमा आउने इच्छा छ । अध्यक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । जिम्मेवार ठाउँ चाहियो ।
टिमले काम गर्ने हो । पारस खड्का एक्लैले काम गरेर क्रिकेट अगाडि बढ्ने होइन । क्रिकेट टिमको रुपमा हामी सफल छौं । सबैको सहयोगले कप्तानका रुपमा पनि सफल छु । भोलि क्रिकेट संघमा जाने हो भने पनि टिमले नै काम गर्नुपर्छ । सबैको सहकार्य हुनुपर्छ । एउटा मात्र व्यक्तिले हाक्ने हो भने घर चलाएमात्र हुन्छ ।
नेपाली क्रिकेटमा पारस खड्काको सिन्डिकेट छ भन्ने आरोप तपाईंलाई छ नि ?
त्यो सिन्डिकेटको कुरा व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नसकेपछि लगाइएका हुन् । जति पनि आरोप लगाउने व्यक्तिहरुसँग म ‘फेस टु फेस’ कुरा गर्न तयार छु । खासगरी क्यानका पदाधिकारीहरुलाई तपाईले क्रिकेटका लागि के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्‍यो भने उहाँहरुसँग एउटा पनि जवाफ छैन ।
अब कसले के भन्छन् भन्दा पनि म नेपाल राष्टिय टिमको कप्तान हुँ । क्रिकेट देशमा लोकप्रिय छ । सय जनामा १० जनाले गाली गरे पनि ९० जनाले माया गर्छन भने म १० जनाको गाली सहन तयार छु ।